‘भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको हदम्याद सम्बन्धी कानून निन्दनीय’ « Khasokhas KHASOKHAS ON GOOGLE NEWS CoronaVirus Fact Checking CoronaVirus News Update CoronaVirus: Stories of Hope CoronaVirus Resource Center File UI or PUA Claim Donate to Khasokhas KHASOKHAS E-MAGAZINE
‘भ्रष्टाचारीलाई कारवाहीको हदम्याद सम्बन्धी कानून निन्दनीय’
गीत, संगीत, पत्रकारिता, साहित्य एवम् बिबिध अभिब्यक्ती अभियान अन्तरगत भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान सन्चालन गरिरहेको हेम सरिता पाठक फाउण्डेशनले नेपालमा भ्रष्टाचार अरु मौलाएको देखेर चिन्ता र चासो ब्यक्त गर्दै हाल नेपालमा भईरहेको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार गर्ने ब्यक्तीहरुलाई गरिएको कार्बाहि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसंग सम्बन्धीत सरकारले पेश गरेका ऐनहरुको बारेमा सम्बन्धीत निकायलाई ३ प्रश्न सोधेको छ ।
सरकार, अख्तियार र नेपाली कांग्रेसलाई अमेरिकाबाट फाउण्डेशनले यस्ता ३ प्रश्न गरेको छ । संस्थाका प्रमुख संरक्षक हेम पाठकले जारी गर्नुभएको बिज्ञप्तीमा उठाईएको ३ प्रश्न यस प्रकार छन् ।
१ हालै ललिता निबासको जग्गाको सबालमा २ जना ब्यक्तीले जग्गा छोडि दिन्छौ भनेको हुनाले कार्बाहि नगरिएको अख्तीयारले जनाएको छ । उक्त दुई जना बाहेक अरु जो जसको नाममा जग्गा लालपुर्जा कायम छ तिनीहरुलाई तिमीहरु जग्गा छोड्छौ कि कार्बाहि गरौ भनेर अख्तीयारले सोध्यो की सोधेन ? अथवा भोली अरु भ्रष्टचारीलाई कार्बाहि गर्ने सन्दर्भमा मैले भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अकुत सम्पती फिर्ता गछू भनेर बयानमा भन्यो भने क्लीन चिट दिन मिल्ला त ?
२ नेपाली कांग्रेस के भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्ने पार्टी हो ? होईन भने किन कुनै भ्रष्टाचार आरोपी नेताको बारेमा पार्टी नै पछि लाग्ने ?
३ हाल सरकारले पास गराउन खोजेको ठुला भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्बाहिको हदम्याद सम्बन्धी कानुन घोर निन्दनिय छ । यो कानुन पास गरियो भने सत्तामा रहेका ब्यक्तीहरु अरु बढि भ्रष्टचार गर्न प्रोत्साहित हुनेछन् । यो त भ्रष्टाचार बिरुद्धको अभियानको ईतिहासकै सबैभन्दा बाधक बन्नेछ ।
त्यसकारण यो हदम्याद सम्बन्धी कानुन पास गर्न नदिन सम्पुर्ण भ्रष्टाचार बिरोधी सांसदज्यूहरुलाई हार्दिक आग्रह गर्र्दै मन्त्रीपरिषदको निर्णय उपर अख्तियारले हेर्न नमिल्ने भन्ने बिषयमा बन्न लागेको कानुनमा पनि गम्भिर रहन फाउण्डेशनले सबै चेतनशिल नागरिकमा हार्दिक आग्रह गरेको छ ।